Ronaldo Oo Ka Hadlay Hadii Neymar Uu Dheeli Karo Koobka Aduunka 2018 & Rajada Dalkiisa %
Ronaldo Oo Ka Hadlay Hadii Neymar Uu Dheeli Karo Koobka Aduunka 2018 & Rajada Dalkiisa
Iyadoo Koobka Aduunka ee Russia, uu ku dhow yahay in la baasto, Ronaldo Nazario wuxuu ogyahay waxa uu yahay dhaawac, laakiin waxa uu talo ka siiyay ciyaaryahanka ay isku dalka yihiin ee Neymar.
Weerar yahankii hore ee Barcelona iyo Real Madrid, ayaa wuxuu la kulmay dhibaato lamid ah tani sanadkii 2002-dii, laakiin wuxuu uga digay Paris Saint-Germain, inay si taxadar leh u ilaaliyaan xidigaan.
“Wuxuu u baahan yahay inuu diirada saaro wanaagiisa waana inuu ka ilaaliyaa nafsadiisa cadaadiska intii suurtogal ah,” ayuu ku yiri xaflad shirkada aqagbka Isboortiga sameysa ee Nike ay soo abaabushay
“Waxaana hubaa in soo kabashadiisa ay ka dhaqsi badnaan doonta sida loo malaynayo, waana uu kasoo muuqan doonaa koobka aduunka.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayaa sidoo kale heysta rajo weyn oo ku aadan qarankiisa inuu kasoo dhaqaali doono dhacda Ruushka lagu qabanayo
“Dareen wanaagsan ayaan ka qabaa xulkeyga Brazil,” ayuu qirtay.
“Waxay ku jireen waqtiyo adag, laakiin sanooyinkii ugu dambeeyay waxay sameeyeen shaqo aan caadi aheyn waxayna qabeen kalsooni.
“Dhaawaca Neymar waa nasiib darro, laakiin waxaan ku qanacsanahay inuu soo laaban doono xagaaga, waxaana ku xisaabtameynaa ciyaartoyda kale ee fiican,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Ronaldo Nazario.
Neymar oo laga yaabo inuu ka tago hadii tababarahan uu yimaado kooxda PSG
Arsenal Oo Dabaha Guulaha Kusoo Noqotay Xili Ay Emirates Ku Xasuuqeen Watford [Sawiro]